महानगरको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न
चन्द्रमणि भट्टराई | २०७६-०२-०३ | १५१६ ६
पूर्वाधारमा भन्दा व्यवस्थापकीय पक्षमा नागरिकको धेरै चासो
काठमाडौं । शुक्रबार काठमाडौं नगर कार्यपालिकाको आयोजनामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रदर्शनीमार्ग स्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिएको सुनुवाईमा, सहभागीहरुले लिखित र मौखिक प्रश्न गरेका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागीले भौतिक संरचना निर्माणभन्दा सहरी व्यवस्थापनमा महानगरले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । प्रश्नकर्ताले दिएका सुझावमा — सडक पेटी व्यापारमा नगर प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन हुनु पर्ने, सूर्योदय अगावै फोहोर संकलन गरिसक्नु पर्ने, फोहोर व्यवस्थापनमा लागेका निजी क्षेत्रको परिचालनमा महानगरले नियमन गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्यमा सरकारी कार्यालयबीच समन्वय गर्नुपर्ने, समावेशी र अपाङ्मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने लगायत बिषयमा केन्द्रीत थिए । त्यस्तै प्रश्नकर्ताहरुले — खुल्ला मञ्च कहिलेसम्ममा खुल्ला हुन्छ? महानगरको केन्द्रीय कार्यालय कहिलेसम्ममा निर्माण हुन्छ? भ्यु टावरको कुरा के हो? छाडा कुकुर कहिलेसम्ममा नियन्त्रण होलान्? महानगरभित्र धेरै महिला समूह छन्, यिनीहरुको अभिभावकत्व महानगरले लिने कि नलिनेजस्ता प्रश्नमार्फत आफ्ना चासोहरु अभिव्यक्त गरेका थिए ।
प्रश्नकर्ताले जनस्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, प्रकोप व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र कार्यालय सञ्चालन प्रणाली, केन्द्रीय कार्य पद्धति सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय भवन, सुकुम्बासीलाई घर नं. दिने कुरा, स्बबासीको पहिचानजस्ता शीर्षकमा गुनासा तथा सुझाव राखेका थिए ।
यसरी उठेका प्रश्नहरुको महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले जवाफ दिनुभएको थियो । त्यस्तै उहाँलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने र वडाध्यक्षहरु रामकृष्ण श्रेष्ठ, नारायण भण्डारीले सहयोग गर्नुभएको थियो । सहभागीका गुनासो र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख शाक्यले — जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने कार्यपालिका र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नेतृत्व गर्ने व्यवस्थापिकाको प्रमुख जिम्मेवारी नागरिक सेवा सन्तुष्टि काय गराउनु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वाधार बिकास, सामाजिक क्षेत्रको उत्थान, कला, संस्कार र संस्कृतिले पहिचानयुक्त पर्यटकीय स्थानको बिकास गर्न र पहुँचयुक्त तथा समावेशी सहर बनाउन आफू प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रश्नकर्ताबाट प्राप्त भएका साना साना सबालको पनि जवाफ दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा धारणा राख्ने क्रममा उपप्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गीले — नागरिकसँगको दोहोरो सम्वादबाट शुशासन र सेवाको पारदर्शितामा टेवा पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । आफूले काम थालेको २ बर्षमा प्राप्त उपलब्धी र सिकाईलाई आगामी दिनको सुधारमा उपयोग गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
नागरिकले सोधेका सवालको जवाफ दिने क्रममा वडा सचिवलाई बर्षौंसम्म सरुवा नगरी किन एकै ठाउँमा राखेको भन्ने प्रश्न आएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले उत्तर दिनुभयो । कर्मचारीलाई दण्डित गर्नुप¥यो भने सरुवा गरिदिने निजामति सेवाको व्यवस्था हेर्ने हो भने एकै ठाउँमा कर्मचारी हुनुलाई राम्रो मान्नुपर्छ । महानगरका कर्मचारी काठमाडौं महानगरकै लागि नियुक्ति भएकाले एउटा वडाबाट सरुवा भए अर्को वडासम्ममा पुग्ने अबस्थामा जानकारी गराउनुभयो ।
महानगरको योजना योजना वैङ्क भएका काम, वडाले सम्पादन गर्ने काम, सेवा लिन जाँदा सेवाग्राहीप्रति गरिने व्यवहार प्रश्नकर्ता अनुभवका रुपमा सोधेका थिए ।
सुनुवाई शुरु गर्नुअघि स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता सुरेन्द्र महतोले नागरिक प्रतिवेदनपत्र र बहिर्गमन अभिमतको नतिजा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यस क्रममा महानगरका १६२ जनासँग सेवा सन्तुष्टि, सेवाको नियमितता, पूर्वाधार र सरसफाइ, सवाको पारदर्शितालगायत शीर्षकमा प्रश्नहरु सोधिएको थियो । यसरी सोधिएको प्रश्नमा नागरिकले दिएको उत्तरलाई नागरिक प्रतिवेदन पत्रका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसै गरी सेवा लिएर कार्यालयबाट बाहिर निस्कने सेवाग्राहीलाई सेवा कति सहजतापूर्वक प्राप्त भयो भनेर सोधिएको प्रश्नबाट प्राप्त भएको जवाफ समेटेर तयार पारिएको बहिर्गमन अभिमतको परिणाम प्रस्तुत गरिएको थियो । महानगरबाट प्रवाह हुने सेवामा शिफारिसतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थात् ७० प्रतिशत सन्तुष्टि देखिएको छ । वडामा काम गर्न जाँदा सूचना पर्याप्त प्राप्त गरेको, कम समयमा नै सेवा प्राप्त हुने गरेको, खोजेको कागज तुरुन्तै पाइने गरेको बहिर्गमन अभिमतले देखाएको परिणाम हो ।
चुरोट मात्र होइन, सूर्तिजन्य बस्तुमा नियमन Previous Post
सौन्दर्य सामाग्री तयार पार्ने तालिम सम्पन्न Next Post